Luka Modric Oo Ka Hadlay Go'ankiisa Cusub Ee Wadahadalada Qandaraaska Ee Real Madrid
HomeWararka CiyaarahaLuka Modric oo ka hadlay go’ankiisa Cusub ee Wadahadalada qandaraaska ee Real Madrid
Luka Modric oo ka hadlay go’ankiisa Cusub ee Wadahadalada qandaraaska ee Real Madrid
Laacibka khadka dhexe ee Real Madrid Luka Modric ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay mustaqbalkiisa Bernabeu uuna sugayo heshiiska.
36-sano jirkaan ayaa mar kale u noqday ciyaaryahan muhiim u ah Los Blancos inta lagu guda jiro xilli ciyaareedka 2021-22, isagoo saftay 37 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay seddex gool iyo sagaal caawin.
Modric ayaa ka horyimid kooxda Chelsea wareega 8da ee Champions League, dhanka kale, iyadoo kooxda Carlo Ancelotti ay iska xaadirisay semi-finalka tartanka.
Qandaraaska ciyaaryahanka khadka dhexe ee haatan ee Madrid ayaa ku eg dhamaadka bisha June, walina ma jiro wax war ah oo ku saabsan kordhinta rugcadaaga.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga reer Croatia ayaa sheegay in ay taasi sii wadi doonto “sanadba sanadka ka dambeeya”, waxaana uu haatan diiradda saarayaa sidii uu kooxdiisa uga caawin lahaa in ay si adag u soo afjaraan ololaha.
“Sannadba sanadka ka dambeeya ayaan u socdaa sida had iyo jeer, hadda waxa muhiimka ah ayaa ah inaan ku jirno semi-finalka, waxaan ku bixiyaa intii karaankeyga ah garoonka si aan u soo celiyo dhammaan kalgacalka Madridistas ay ii muujiyaan,” Modric ayaa u sheegay suxufiyiinta.
Marka laga soo tago in ay u dagaalanto guulo ay ka gaarto Champions League, Real Madrid ayaa sidoo kale ku jirta boos xoogan oo ay ku hanan karto La Liga, iyadoo 12 dhibcood ka sareysa Barcelona oo ku jirta kaalinta labaad .